Float အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Float အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Float အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက်။ ကျနော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုချက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသီအိုရီအဖွဲ့များနှင့်နည်းပညာကျောရိုးချီတက်ကြပါပြီ။ ဤမြေကွက်၌ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုတေသနနည်းလမ်းများတွင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် client ရဲ့စံနှုန်းအဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်အဘယ်သူကိုကျွမ်းကျင် Merchandising & အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဌာနခွဲမှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတင်ပို့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - CAST STEEL No. FS2 ~ FSH12F SERIES
DSC CAST သံမဏိ float&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်
●1/2&ကဗျာ;၃/4&ကဗျာ;၁&ကဗျာ;DIFFUSER နှင့်အတူရေခံ HUMMER နိုင်သလား.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/float-thermostatic-steam-trap.html
အကောင်းဆုံး Float အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Float အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
အားလုံးသံမဏိ float DSC&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.F71、F71F ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 20K 280 x̊ဂ. ●DSC F71 သံမဏိ F ကိုတံဆိပ်ခတ်&စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှု၏သာလွန်သောထိရောက်မှုနှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအလင်းတန်းများအတွက်ပေါ့ပါးသောထောင်ချောက်ကိုသတိပြုပါ. ●ORIDE ORDERED နိုင် OR နှစ်ဖက်စလုံးမှ ORIZONTAL INLET နှင့် OUTLET ညွှန်ကြားချက်စထရိန်ကို INLET CHANNEL မျက်နှာပြင်တွင်တပ်ဆင်ပြီးလိုအပ်သည်အတိုင်းသတ်မှတ်ချက်များသို့လုပ်နိုင်သည်။. ●ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသည်. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.F71